रिटर्न – Shekou Woman
हामी बुझ्न भनेर आइटम खरीद अनलाइन don ' t always go as planned, Shekou महिला प्रस्ताव एक स्टोर क्रेडिट गर्दा एक आइटम फर्के छ. हामी प्रदान छैन फिर्ती. माध्यम पढ्न कृपया हाम्रो नीति रिटर्न ध्यान रूपमा तिनीहरूले स्वीकार गर्दै मा आफ्नो खरीद मा यहाँ Shekou महिला । Returns must be returned to us within 14 days of receiving your item (अपडेट - कारण COVID-19 postage ढिलाइ हामी बुझ्न भनेर लाभ हुनेछ अब सामान्य भन्दा वितरित गर्न to us. यसरी हामी विस्तारित हाम्रो रिटर्न समय 60 दिन देखि आफ्नो वस्तु प्राप्त.)यदि आफ्नो खरीद निहित एक प्रचारक वा स्वतन्त्र आइटम यी वस्तुहरू भित्र समावेश हुनुपर्छ फिर्ती. कृपया द्रष्टव्य: हामी क्रेडिट प्रदान टिप्पणीहरू मात्र, कुनै फिर्ती. Once we receive your return अनुमति कृपया 2-5 दिन आफ्नो फिर्ती प्रक्रियामा र त्यसपछि तपाईं एक इमेल प्राप्त हुनेछ को विवरण संग आफ्नो स्टोर क्रेडिट. Shekou महिला अन्तिम अठोट मा सबै विवाद रूपमा, प्रति उपभोक्ता व्यवस्था छ ।
तपाईं आवश्यकता भने एक प्रतिस्थापन आकार वा वैकल्पिक वस्तु/s, तपाईं गर्न आवश्यक हुनेछ ठाँउ मा एक नयाँ क्रम संग आफ्नो स्टोर क्रेडिट प्रदान । कारण छिटो कारोबार को शेयर, हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भनेर हामी हुनेछ आफ्नो मनपरेको आकार/शैली मा स्टक ।
हाम्रो स्टोर फिर्ती नीति क्लिक गर्नुहोस् यहाँ
तपाईं डाउनलोड गर्न सक्छन्, हाम्रो रिटर्न फारम उहाँलेआरई.
वस्तु/s must be in original condition and in the original packaging. कृपया निश्चित हुनुहोस् हेरविचार गर्न प्रयास गर्दा मा लुगा, हामी स्वीकार छैन लुगा छ कि रहनसहन दाग र/वा बास्ना को अत्तर वा शरीर गंध.
Item/s हुँदैन गरिएको छ थकित, धोए वा वदलाव कुनै पनि तरिकामा. Shekou महिला अधिकार अस्वीकार गर्न कुनै पनि वस्तु/s छैनन् भनेर returned in their original condition वा गन्ध को शरीर गंध/अत्तर र यो फर्के गरिनेछ ग्राहक गर्न.
घायल आभूषण, बाल सामान, lingerie and swimwear हुन सक्दैन फर्के for health and hygiene reasons.
The item/s फर्के हुनुपर्छ ठेगाना द्वारा प्रदान Shekou महिला अघि क्रेडिट प्रक्रियामा छ । हाम्रो रिटर्न ठेगाना मा यसो हाम्रो रिटर्न form, please make sure यो फर्कन गर्न यो सही ठेगाना छ भने, गर्न पठाइएको कुनै पनि अन्य ठेगाना हामी गर्न असमर्थ हुनेछ भने स्वीकार फिर्ती. लागत को मूल माल र फर्कन गोदाम will not be reimbursed फिर्ता गरीयो वा रूपमा उल्लेख अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता व्यवस्था छ । यदि प्याकेज गर्दैन पुग्न हामीलाई सुरक्षित we will not be able to issue refund. हामी सिफारिस पठाउने संग एक हुलाक सेवा संग tracking to avoid any issues.
कृपया याद गर्नुहोस् कि रंग मा मतभेद उत्पन्न हुन सक्छ कारण चर सहित कारक: पृष्ठभूमि, रङ, प्रकाश, र विभिन्न कम्प्युटर मनिटर. रंग मा मतभेद छैन नियंत्रणीय सीमा भित्र छन् एक गुणवत्ता मुद्दा हो ।
किन हामी सक्दैन विनिमय लागि आकार/शैली
कारण छिटो कारोबार को शेयर, हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भनेर हामी हुनेछ आफ्नो मनपरेको आकार/शैली मा स्टक मा आइटम फर्कन, न त स्टक सुरक्षित वा अलग राख्नु.
हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं, कुनै पनि लाभ मा कुनै पनि बिक्री आइटम वा वस्तुहरू पनि खरिद गर्न प्रयोग कुनै पनि प्रचार कोड. कृपया, चयन आइटम को समयमा प्रचार/बिक्री समयावधिको ध्यान जोगिन कुनै पनि निराशा.
छ भने तपाईं प्राप्त, एक दोषपूर्ण आइटम फर्कन कृपया यो हामीलाई । सबै आइटम मूल्यांकन हुनेछ मा फर्कन र बुझयो faulty द्वारा Shekou महिला । दोषपूर्ण आइटम समावेश छैन भनेर ती छ. पहिले नै थकित गरिएको. If your item is बुझयो faulty we will send youareplacement. तपाईं पठाइने नै आइटम मा एउटै आकार र रंग तपाईं मूलतः आदेश दिए ।
कुनै रद्द, परिवर्तन, वा फिर्ती सकिन्छ एक पटक एक क्रम राखिएको छ र भुक्तानी प्रक्रियामा छ.
लागत को रिटर्न
ढुवानी लागत द्वारा incurred को लागि ग्राहक फर्केपछि item/s मा ढाकिएको छैन वा द्वारा reimbursed Shekou महिला । विषय हाम्रो दायित्व अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता व्यवस्था लागि कुनै पनि फिर्ती you will be responsible for shipping charges.
ORGANIZING A फर्कन
भने तपाईं भेट गर्नुभएको माथि आवश्यकताहरु फर्कन कृपया आफ्नो वस्तु/s संग आफ्नो लाभ फारम प्रदान ठेगाना मा फारम within 14 दिन.
We will not be held liable for any item/s फर्के एक स्थान अन्य एक भन्दा हामी प्रदान.
लाभ र विनिमय समय
हामी हाम्रो प्रयास गर्न मुश्किल बारी आफ्नो लाभ वरिपरि रूपमा चाँडै रूपमा सम्भव छ ।
अनुमति कृपया 2-5 व्यापार दिन आफ्नो फिर्ती प्रशोधन गर्न र हामीलाई इमेल संग तपाईं आफ्नो स्टोर क्रेडिट. सबै स्टोर क्रेडिट पठाइने इमेल मार्फत so please be sure to double check your email address.